Deg deg:Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay ka mid yihiin Wasiirka Howlaha Guud iyo Guryeynta…… – idalenews.com
Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay ka mid yihiin Wasiirka Howlaha Guud iyo Guryeynta Xukuumadda Federaalka Eng; Saadaq C/llaahi Cabdi,Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya olgan bakar, Xog-hayaha Guud ee Dawladaha Hoose ee dalka Turkiga Mudane Hayrettin Gungor ayaa maanta oo isniin ah kormeer ku tagay deegaanka Goobweyn ee Gobolka Jubbada Hoose.
Ujeedka Kormeerka Wafdiga ay ku deegaanka Goobweyn ayaa ahaa sidii ay u soo indha idheyn lahaayeen Xaaladda guud ee deegaanka iyo suurta galnimada fursadaha maalgashi ee lagu sameyn karo.
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Danjiye olgan bakar iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay gaaray magaalada Kismaayo ayaa kullamo la qaatay madaxweynaha Dowladda Goboleedka Jubbaland Axmed madoobe,iyagoona ka wada hadlay Arrimo ay ka mid yihiin Horumarinta,kobaca dhaqaalaha iyo Ganacsiga iyo sidii mashaariic looga fulin lahaa deegaanada Jubbaland.
Kullanka madaxweynaha Dowlada Goboleedka Jubbaland Iyo Safiirka Turkiga waxa qeyb ka ahaa wasiirka Howlaha Guud iyo Dib u dhiska dalka Eng: Saadaq C/llaahi Cabdi,Guddoomiyaha Barlamaanka jubbaland iyo xubno kale oo katirsan Dowlada Soomaliya .
Xubnihii uu hogaaminayay Safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa si aad ah ula dhacay qorshaha Jubbaland ay soo bandhigtay ee ku aadan maalgashiga.
Ugu danbeyntii,madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ku dhiira geliyay cid kasta oo dooneysa iney maalgashato deegaanada Jubbaland,wuxuuna carabka ku adkeeyay iney balan qaadayaan sugida amnigooda.
Wàkiilka Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay kordhineyso taageerada…..